यसरी मनाउँदै छन् सेलेब्रेटीहरूले तीज :: Setopati
यसरी मनाउँदै छन् सेलेब्रेटीहरूले तीज
सबै तस्बिर सामाजिक सञ्जालबाट
महिलाको पर्वका रुपमा लिइने तीजको हरियो र रातो रंगले नेपाली कलकारहरुलाई छपक्कै रंगाएको छ।
आज बिहानै वर्तमान समयकी चर्चित अभिनेत्री स्वस्तिमाले फेसबुकमा छोटो भिडिओ मार्फत भनिन्, 'सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनीहरुमा २०७८ साल तीजको धेरै धेरै शुभकामना! यस पालिको तीज सुरक्षित भएर मनाउनु होला।'
भिडिओको अन्तमा उनले 'लभ यु अल' भन्दै फ्लाइङ किस पनि दिएकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय अभिनेत्री रेखा थापाले त आज तीजबारे दुइटा स्टाटस लेखिसकिन्।
'जीवनका कुनै न कुनै हिस्सा भित्र कुनै न कुनै उत्सव लुकेको हुन्छ। तीज भनेको विरहको बिच एउटा उत्सव हो। तीजको शुभकामना!'
बिहानीपख यो स्टाटस लेखेकी रेखाले त्यसको तीन घन्टाको अन्तरालमा फेरि अर्को पोस्ट गरिन्, 'पर्खेर पाउने, आशा गरेर खाने, पूजा गरेर खुशी पार्ने अनी डराएर बाच्ने जीवन बाट मुक्तिको लागि तिज एउटा अवसर बनोस्। सबै दीदी बहिनीलाई शुभकामना!'
शुभकामना दिने क्रममा स्वस्तिमा हरियो र रेखाले रातो पहिरन रोजेका छन्।
नयाँ फिल्मका साथ दर्शकसमक्ष पुग्न नपाएको बेला तीजको शुभकामना कतिपय कलाकारका लागि स्रोता दर्शकसँग जोडिने बहाना पनि बनेको छ।
हालै युट्युब च्यानलमा सक्रिय हुन थालेकी अभिनेत्री केकी अधिकारी यसको उदाहरण हुन्। फेसबुकमा उनले 'तीजको असीमित शुभकामना!' लेखेर आफ्नो युट्युब च्यानलको लिंकसमेत बाँडेकी छन्। भिडिओमा उनी राजकुमारी डायनाको लुक्स देखिन्छिन्।'
सामाजिक सञ्जालमार्फत तीजको शुभकामना दिनेमा अभिनेत्रीजस्तै गायिकाहरु पनि कम छैनन्।
गत वर्ष चलेको तीज गीत 'आयौं चेली' की गायिकामध्ये एक रचना रिमालले पनि तीजको शुभकामना दिँदै आफ्नो यस पटकको गीत 'तीजको महिना छ' बोलको गीतको युट्युब लिंक पोस्ट गरेकी छन्।
कलेजी रंगको सारी र चोलोमा देखिएकी रचनाले यही लुक्समा हिजो दरखाने दिन पनि नयाँ गीतको लिंक राख्दै यस्तो लेखेकी थिइन्, 'दर पकाउँदै- खाँदै गर्दा यो गित सुनेर नाच्नु पर्छ है । सबैमा शुभकामना!
नेपाल आइडलकी निर्णायक बनिसकेकी गायिका ईन्दिरा जोशीको छोटो तीज शुभकामना यस्तो छ, ुरातो सारी र चोलोमा सजिएको फोटोसहित छोटोमा हेप्पी तीज एभ्री वान मात्र लेखेकी छन्।'
तीजको बेला घुइँचो लाग्ने पशुपतिनाथको मन्दिर गएको वर्षजस्तै यस पटक पनि खुलेको छैन।
सामान्य अवस्थामा जस्तै गाउँटोलका दिदी-बहिनी एकैठाउँ भेला भएर नाचगान गर्ने देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा धेरैले आफ्नै वरपरका मन्दिरमा शिवजीको पूजाअर्चना गरेर तीज मनाइरहेका छन्। केही महिनाभन्दा स्थिति सामान्य बने पनि तीजको पुरानो रौनक फर्किसकेको छैन।
अभिनेत्री आँचल शर्मालाई पनि यस पटकको तीज यस्तै लागिरहेको छ। उनी आज बिहान श्रीमानको घर बुढानिलकण्ठबाट माइतीघर चाबहिल आएकी हुन्। परिवारका साथमा रमाइलो भए पनि वरपरको माहोलमा पहिलाजस्तो उत्साह नभएको उनले बताइन्।
गत वर्ष तीजको ब्रत बसेकी उनी यस पटक ब्रत बसिनन्। सेतोपाटीसँग टेलिफोनमा उनले भनिन्, 'गएको वर्ष बिहे गरेको पहिलो वर्ष भएकोले ब्रत बसेको हो। यस पटक आमा, बुबा, बहिनीसँग समय बिताएर तीज मनाउँदै छु।'
उनले दुई तीन अझै चाबहिलमै बिताउने बताइन्।
गएको वर्षभन्दा यस पटकको तीज केही खुकुलो महसुस गरेकी अभिनेत्री केकी अधिकारी यस पटक अलि सहजताका साथ बाहिर निस्कन पाएकोमा खुसी छन्।
'सुरक्षाका लागि मन्दिर वा भीडभाड भएको ठाउँमा नगई हिँडडुल गर्न पाउँदा गएको वर्षभन्दा यस पटक रमाइलो लागिरहेको छ,' केकीले भनिन्।
अभिनेत्री केकी १० वर्षदेखि तीजको व्रत बस्दै आएकी छन्। सुरूमा फुपू, दिदीहरूले व्रत बसेको देख्दा रहरले सुरू गरेकी थिइन्। बिस्तारै व्रतले स्वास्थलाई पार्ने सकारात्मक प्रभाव महसुस गरेपछि निरन्तरता दिइन्। व्रत बस्दा मनमा शान्ति मिल्ने उनको अनुभव छ।
सेतोपाटीसँग उनले भनिन्, 'तीजको व्रत बस्दाको भाइब्स र इनर्जी मलाई शक्तिशाली लाग्छ। त्यसैले यस पटक पनि फलफूल र पानी खाएर व्रत बसेँ।'
पछिल्लो समयकी चर्चित गायिका अस्मिता अधिकारी पनि यस पटक तीजको रमाइलो गर्न परिवारका साथमा घरबाहिर निस्केकी छन्। पहिलो पटक तीजको व्रत लिएकोले उनका लागि यो वर्षको तीज विशेष बनेको छ।
उनले आफू व्रत बस्ने कारण बताउँदै सेतोपाटीसँग भनिन्, 'सबैले व्रत लिएको देखिरहेको, आफूले पनि अनुभव लिनु पर्यो भनेर यस पालि व्रत लिएको हुँ।'
सुरक्षाका कारण पूजाआजा घरमै गरेर तीज मनाएकी उनले फलफूल र पानी खाने गरी व्रत बसेको बताइन्।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २४, २०७८, १६:२८:००